राधीको सेयरमा खतरनाक इन्साइडर ट्रेडिङ, करोडौंको सेयर बेचेर बाहिरिए अध्यक्ष रुङ्गटा - Arthatantra.com
काठमाडौं । कानून विपरित राधी विद्युत कम्पनीका अध्यक्ष अनिल कुमार रुङ्गटाले नै सेयर कारोबार गरेको पाइएको छ ।
संगठित संस्थाको पदाधिकारीले पदमा रहँदा वा छोडेको १ वर्षसम्म सेयर कारोबार गर्न नपाउने धितोपत्र बोर्डको स्पष्ट कानून छ । तर राधी विद्युत कम्पनीका तत्कालिन अध्यक्ष अनिल कुमार रुङ्गटाले पदमा रहँदा नै सेयर बिक्री गरेर कम्पनीबाट बाहिरिएको प्रमाण फेला परेको छ ।
विभिन्न ४ वटा कम्पनीमा अध्यक्ष रहेका रुङ्गटाले नै इन्साइडर ट्रेडिङ गर्दा लगानीकर्ता फसेका छन् । प्राप्त विवरण अनुसार अध्यक्ष रुङ्गटाले चैत दोस्रो सातादेखि असारको अवधिमा २ लाख १७ हजार ४४२ कित्ता सेयर विभिन्न मूल्यमा बिक्री गरेको नेप्सेको तथ्यांकले देखाएको । राधी विद्युत कम्पनीमा खारे इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको तर्फबाट सञ्चालक रहेका रुङ्गटाले २०७८ असार ७ गते राजीनामा दिएको धितोपत्र बोर्डलाई जानकारी गराइएको थियो ।
बोर्डलाई खारे इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालक रुङ्गटालाई फिर्ता बोलाएर उक्त पदमा भिष्ममान पतिलाई नियुक्त गरेको जानकारी गराइएको थियो । उहाँले राधी छाड्नु अघि दुई आर्थिक वर्षको एकै पटक बोसन सेयर ३६.५० प्रतिशत दिने र त्यसको केही समयमा १४७.५२ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
लाभांशले बजार बढाउँदा कसरी फसे लगानीकर्ता ?
हकप्रद सेयर घोषणा गरेको भोलिपल्ट अर्थात जेठ १७ गते कम्पनीको सेयर मूल्य ११४ रुपैयाँले बढेर १२५६ अंकमा पुग्यो । बोनस र हकप्रद घोषणा गरेपछि जेठ १८ गते जलविद्युत कम्पनी मध्ये सबैभन्दा बढी १३ सय बिन्दुमा पुग्यो । त्यसपछि कम्पनीको सेयर मूल्य घट्न थालेको देखिएको छ ।
रुङ्गटाले राजीनामा दिएको दिन अर्थात असार ७ गतेसम्म आईपुग्दा कम्पनीको सेयर मूल्य १३०० बाट २८९ अंकले घटेर १०११ बिन्दुमा आइपुगेको थियो । असोज ११ गतेसम्म आईपुग्दा ६७० रुपैयाँमा कायम भएको पाइएको छ । रुङ्गटाले इन्साइडर ट्रेडिङ गरी करोडौं रुपैयाँ कमाएर बजारबाट बाहिरिए पनि प्रायः लगानीकर्ता भने सो कम्पनीबाट नोक्सानीमा गएका छन् ।
जानकारका अनुसार कम्पनीले २ वर्षको लाभांश नबाँडेर जगेडा कोषमा पैसा जम्मा गरेर एकै पटक ३६.५० प्रतिशत बोनस सेयर दिने र लगत्तै १४७.५२ प्रतिशतको प्रलोभन देखाएर इन्साइडर गरेको छ । लाभांश घोषणा गरेपछि कम्पनीको सेयर मूल्य ह्वात्तै बढेको थियो । त्यस बेला कम्पनीको सेयर मूल्य सबैभन्दा बढी १३ सयको हाराहारीमा पुगेको थियो ।
यहाँ अझ रोचक प्रसंग के छ भने तत्कालिन समयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले इन्साइडर ट्रेडिङ, कर्नरिङ भयो भनेर असार १ गते निकालेको ५१ वटा कम्पनीको नाममा राधी विद्युत कम्पनीको नाम पनि रहेको छ ।
धितोपत्र बोर्डको सहायक प्रवक्ता रुपेश केसीका अनुसार यो विषयमा सेबोनले अनुसन्धान गर्ने र इन्साइडर ट्रेडिङ भएको पाइएमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन-२०६३ अनुसार कारबाही हुने छ ।
ऐनमा धितोपत्रको भित्री कारोबार र धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी कसूर तथा दण्ड सजायको विषयमा दफा ९१ मा भित्री कारोबारलाई उल्लेख गरिएको छ भने दफा १०१ मा दण्ड सजायको व्यवस्था रहेको छ । केसीका अनुसार बजारमा कसैले पनि इन्साइडर ट्रेडिङ गर्न नहुने र गरेको पाइएमा सोही अनुसार कारबाही हुनेछ ।
रुङ्गटाको संलग्नता ?
राधीबाट रुङ्गटाले असार ७ गते राजीनामा दिए पनि अन्य एक दर्जन बढी कम्पनीको अध्यक्ष तथा संचालकको रुपमा कार्यरत रहेको पाइएको छ । सो कम्पनी नेप्सेमा सूचीकृत रहेको छ ।
करिब १ दर्जन कम्पनीको मुख्य कम्पनी सिइडिबी हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी हो । सिइडिबी हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लगानी गर्ने कम्पनी हो । सोे कम्पनी पनि नेप्सेमा सूचीकृत रहेको छ । सो कम्पनीका धेरै सहायक कम्पनीमा रुङ्गटा अध्यक्ष तथा सञ्चालकको रुपमा रहेको पाइएको छ ।
रुङ्गटा कसुवा खोला हाईड्रोपावर लिमिटेड, र गण्डकी इनर्जी लिमिटेडको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । तर, सो कुरा कम्पनीको वेवसाइटमा भने उल्लेख गरिएको छैन । साथै उहाँ सिइडिबी हाईड्रो, खारे इन्भेष्टमेन्ट, गण्डकी इनर्जी, लमजुङ इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी, राप्ती हाईड्रोपावर एण्ड जनरल कन्ष्ट्रक्सन लिमिटेडमा अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने राधी विद्युत कम्पनीमा पूर्व अध्यक्ष उहाँ नै हुनुहुन्छ ।
सिईडीबी हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको कहाँ कहाँ छ लगानी ?
सिइडीबी हाईड्रोपावर कम्पनीको लगानी मोरङ इनर्जी लिमिटेड, कसुवा खोला हाईड्रोपावर लिमिटेड तथा कसुवा खोला हाईड्रोपावर प्रोजेक्ट ४५ मेगावाटको, गण्डकी इनर्जी र खारे इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडमा सतप्रतिशत स्वामित्व रहेको छ ।
यस्तै राप्ती हाईड्रोपावर एण्ड जनरल कन्ट्रक्सन लिमिटेड र त्यसबाट बनिरहेको ५ मेगावाटको रुकुम गढी हाईड्रोपावरमा ४.०४ प्रतिशत र यूनिभर्सल पावर कम्पनीमा ४.२८ प्रतिशत लगानी रहेको छ । जसले ११ मेगावाटको तल्लो खारे खोला हाईड्रोपावरमा लगानी गर्ने छ ।
सिइडीबी हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको सतप्रतिशत लगानी रहेको गण्डकी इनर्जी लिमिटेडको ८४.१९ प्रतिशत लगानी लमजुङ इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनीमा रहेको छ ।
उक्त कम्पनीले पनि अन्य ५ वटा कम्पनीमा लगानी गरेको छ । जसमा ४.४ मेगावाटको राधी विद्युत कम्पनीमा ४७.२६ प्रतिशत, १८३ किलोवाटको साङगे विद्युत कम्पनीमा ६०.४२ प्रतिशत, १२ मेगावाटको दोर्दी–१ निर्माणको क्रममा रहेको दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनीमा ७८.४२ प्रतिशत, ४ मेगावाटको खाउदी हाईड्रोपावरमा १५ प्रतिशत र ३० मेगावाटको न्यादी हाईड्रोपावरमा २.७८ प्रतिशत स्वामित्व रहेको प्राप्त तथ्याङकमा उल्लेख छ ।
राधीबाट राजीनामा दिएको भए पनि अहिलेसम्म सिइडीबीका साथै लमजुङ, गण्डकीको अध्यक्षमा एकै जना हुनुहुन्छ । राधीबाट उहाँले सेयर बिक्री गरेर बाहिरिएको देखिएको छ । अध्यक्ष रुङ्गटाले राधी विद्युत कम्पनीमा इन्साइडर ट्रेडिङ गरेर आफूसँग भएको सेयर बिक्री गरेर निस्किको देखिएको छ । राधी विद्युत कम्पनीले बोनस र लाभांश सँगसँगै घोषणा गरेर लगानीकर्तालाई प्रलोभनमा पारेको प्रष्ट देखिएको छ ।
प्राप्त विवरण अुनसार यस बीचमा लमजुङ इलेक्ट्रिसिटी कम्पनीले राधीको सेयर सबै बिक्री गरेको पाइएको छ । राधीमा लमजुङको ४७.२६ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । लमजुङमा गण्डकी इनर्जीको ८४.१९ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ भने गण्डकीमा सिइडिबीको सतप्रतिशत स्वामित्व रहेको छ ।
रुङ्गटाको सिइडीबी कम्पनीले सहायक कम्पनीको सेयर बिक्री गरेको रकम वित्तीय विवरणमा देखाउन आनाकानी गरेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार सहायक कम्पनीले कमाएको नाफा मुख्य कम्पनीको विवरणमा सबै उल्लेख गरेको भए असार मसान्तमा नाफा करोड माथी हुने भए पनि त्यो नदेखाएको कम्पनी निकट स्रोतको दाबी छ । हाल नेप्सेमा राधी विद्युत कम्पनी र सिइडिबी हाईड्रोपावर मात्रै सूचीकृत रहेका छन् । अरु कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणमा आएको छैन । यस विषयमा जानकारी लिन खोज्दा रुङ्गटासँग सम्पर्क भने हुन सकेन ।
वि.सं.२०७८ असोज ११ सोमवार १९:०७ मा प्रकाशित
News Views: 3657
अघिल्लाे नेपालीमा बढ्यो साइकल मोह, दुई महिनामा ४० करोड बढीकोे आयात
पछिल्लाे भोलि सार्वजनिक बिदा !